Zava-misy niadian-kevitra: ‘Bombtrack’ sy ny ady mitam-piadiana anatiny ao Però · Global Voices teny Malagasy
Mbola mampiadihevitra hatramin'izao ao Però ilay hira
Voadika ny 13 Janoary 2022 5:14 GMT
Rage Against the Machine. Flickr (CC BY 2.0)
Anisan'ny fitantarana manokana momba ny mozika mampiady hevitra sy voaràra manerana izao tontolo izao ity lahatsoratra ity.
Naseho teo amin'ny tambajotra manerantany toy ny MTV tamin'ny taona 1990 ny hira “Bombtrack” an'ny Rage Against the Machine, ary nahazo laza teo amin'ireo mpankafy rock miteny anglisy. Tahaka ny ankamaroan'ny fitaovan'ny Rage Against the Machine, momba ny hetsi-panoherana ara-tsosialy ny tonon'ilay hira, miaraka amin'ny lahatsarin-kira iray manohana ny fikambanana revolisionera Peroviana Maoista Sakelika Mamirapiratra (Sendero Luminoso amin'ny teny Espaniola) sy ny mpitarika azy Abimael Guzmán. Na izany aza, maro ireo Peroviana manontany ny tantara tian'ny tarika Amerikana ambara momba ny ady mitam-piadiana ao Però. Mampiseho ny fitsapan-kevitra fa mihevitra ny fikambanana ho vondrona mpampihorohoro ankehitriny ny ankamaroan'ny olom-pirenena. Mbola mampiady hevitra hatrany ilay hira.
Mampiseho ireo mpikambana ao amin'ny tarika ao anaty karakara mitovy amin'ilay fampiasan'i Guzmán, mpitarika ny fikambanana Sakelika Mamirapiratra, rehefa miseho ampahibemaso, nambaran'ny governemanta Peroviana, Etazonia, Japana, Kanada, ary ny Vondrona Eoropeana fa fikambanana mpampihorohoro ny horonan-tsary ho an'ny “Bombtrack” (1993), naseho tamin'ny rakikira voalohan'ny Rage Against the Machine. Rehefa mandeha ny horonan-tsary, dia toa hita fa mitantara ny zavatra, araka ny filazan'ny tarika, fa fifandonana teo amin'ireo “ratsy fanahy sy tsara fanahy”: ny governemanta Peroviana sy ny hetsiky ny mpampihorohoro ireo teny sy sary. Efa-taona monja no lasa hatramin’ny nifaranan’ny Ady Mangatsiaka.
Tamin'ny taona 1960, nandalo didy jadona miaramila sy firongatry ny fikomiana anaty akata i Amerika Latina. Tsy naningana i Però. Tamin'ny taona 1980, niharan'ny tsy fahamarinan-toerana ara-politika, tsy fitoviana ary krizy ara-toekarena mafy ny firenena. Nandritra ireo taona ireo, nipoaka ny ady teo amin'ny Fanjakana sy ny vondrona mpiady anaty akata notarihan'ny Sakelika Mamirapiratra, mifototra amin'ny foto-kevitra Marxista-Leninista-Maoista nampiharina tamin-kerisetra. “Nihevitra i Guzman fa nitaky ny hanaovana ny ‘ady malaza’ ny kaomonisma ary nanakiana ireo mpikambana tao amin'ny [Antoko Kaomonista ao Però – Shining Path (PCP-SL)] izay zara raha mandamina fotsiny ireo mpiasa,” araka ny nosoratan'ny Insight Crime.
Tarika metaly hafa avy any California, Etazonia ny Rage Against the Machine. Fantatra amin'ny hafatra ara-politika momba ny foto-kevitra ara-politika ankavia ny vondrona. Tarihin'i Zack de la Rocha, mpikatroka sady mpanao tononkalo avy amin'ny taranaka Meksikana, sy ilay mpitendry gitara Tom Morello, sokajiana ho iray amin'ireo mpitendry gitara 100 mahay indrindra teo amin'ny tantara, araka ny filazan'ny gazetiboky Rolling Stone ny tarika. Mbola milalao mandritra ny fampisehoana amin'ny Fender Telecaster miaraka amin'ny sticker misy soratra hoe “Sendero Luminoso” amin'izany i Morello.
Nalahelo izy ireo noho ny hetsika sokajiana ho mpampihorohoro tao Però, ary koa ny fivavahana maha olona an'i Guzman, mpitarika ny Sakelika Mamirapiratra, izay maty tamin'ny volana Septambra 2021. Nosamborina i Guzman ary voaheloka tamin'ny fiampangana fampihorohoroana tamin'ny taona 1992.
Na izany aza, maro ny Peroviana tsy mitovy hevitra amin'ny vondrona. Nandritra ny Ady Mitam-piadiana Anatiny, nanao fanafihana sy famonoan'olona izay niteraka tsy fandriam-pahalemana sy tebiteby tao amin'ny firenena ny Sakelika Mamirapiratra, ka nahafatesana olona 30 000. Araka ny filazan'ny Vaomieran'ny Fahamarinana sy ny Fampihavanana, tamin'ny 46 isanjaton'ny fitambaran'ny maty tamin'ny ady, lazaina fa nataon'ny mpiasan'ny Fanjakana Peroviana ny 30 isanjato, ary naterak'ireo mpiasa hafa na toe-javatra hafa ny 24 isanjato.
Néstor Ríos Peralta nanoratra tao amin'ny gazetiboky El Club del Rock:
Sendero Luminoso is not a terrorist group because they rose up against the “Yankee capitalist system”, but because they were the protagonists of the darkest history of a country where people woke up every day afraid of not returning home.
Tsy vondrona mpampihorohoro ny Sakelika Mamirapiratra satria nitsangana nanohitra ny “rafitra kapitalista Yankee”, fa satria mpandray anjara ry zareo tamin'ny tantara maizina indrindra tao amin'ny firenena izay nifoha isan'andro tamin-tahotra tsy ho tafody ny olona.
Nanomboka tamin’ny taona 1980 ny hetsik’izy ireo tany Ayacucho, any atsimo-atsinanan’i Però. Na dia eo aza ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona teo amin'ireo vahoaka marefo, dia tsy mba naneho ahiahy firy ny governemanta foibe. Na izany aza, niova tao anatin'ny fotoana fohy izany taty aoriana rehefa tonga tao Lima i Guzmán, izay nantsoina koa hoe “Filoha Gonzalo,” sy ireo mpanara-dia azy. Tao no namonoan’izy ireo ny lehiben’ny tafika sy ny polisy, ny kaongresy, ny mpitarika ara-politika sy malaza, ary koa ny ben’ny tanàna, ary nanapoaka baomba tamin’ny fiarakodia teny amin’ny arabe lehibe teo an-drenivohitra izy ireo, ka nandratra sy namono olona nandritra ny fandalovan'izy ireo. Noho ireo antony rehetra ireo, tsaroan'ny 80 isanjaton'ny Peroviana ho mpamono olona sy mpampihorohoro i Guzman, araka ny filazan'ny iray amin'ireo mpanao fanadihadiana lehibe ao amin'ny firenena.
Mpisera iray antsoina hoe Jose Antonio Saldivar Carrasco nanoratra fanehoan-kevitra teo ambanin'ny lahatsary ofisialin'ny Rage Against the Machine tao amin'ny YouTube:
I am a fan of Rage against the machine, since I first knew them…. But I don't share this idea… Sendero luminoso killed too many innocent people in a horrible way… My uncle lost his 8 brothers and sisters and [they killed] a lady, all tied up in a square, my uncle was saved because he was a child and only worked in the municipality carrying letters…
Mpankafy ny Rage against the machine aho hatramin'ny nahafantarako azy ireo voalohany…. Saingy tsy mitovy hevitra amin'izany.. Namono olona tsy manan-tsiny be loatra tamin'ny fomba mahatsiravina ny Sakelika Mamirapiratra… Namoy ny rahalahiny 8 sy ny anabaviny ny dadatoako ary [namono] ramatoa iray izy ireo, samy nofatorana teo amin’ny kianja iray avokoa izy ireo, avotra ny dadatoako satria mbola zaza izy ary tsy niasa afa-tsy tao amin’ny kaominina mitondra taratasy…
Mbola mavitrika hatramin'izao ny Sakelika Mamirapiratra, satria nanangana fiaraha-miasa amin'ireo mpivarotra rongony ao afovoan'i Però (VRAEM), saingy mihalefy izany. Tamin'ny 23 May 2021, olona 16 no voalaza fa novonoin'ny Sakelika Mamirapiratra talohan'ny fihodinana faharoa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena nokasaina natao ny 6 Jona.
Shily 7 andro izay